Chii chaunofanirwa kunge uchiita muDubai? | Mabasa - Basa - Kufamba kweBasa Kuvhima Don'ts kuDubai
Kuda Kuva Iimwe YeZvenyika Dzakawanda Dzakawanda Munyika
Dai 25, 2019
Zvaunofanira kuva uri ku Dubai
Chii chaunofanira kunge uchiita uchiri kutsvaga basa mu Dubai?
zvakanaka, uchitsvaga basa kuDubai. Pane zvinhu zvishoma zvaunofanira kuziva usati waisa chikumbiro. Uye zvechokwadi, isu tose tinoziva hachisi chinhu chakareruka kuita. Pfungwa yakaoma kuti uchengete pfungwa dzako dzakanangana kusvika padanho. Usambofa wakadzika pasi uye chengeta pfungwa dzako dzakagadzirirwa kubudirira. Iva akatendeseka zviri nyore kunyora. Zvakanyanya kuoma kubata.
Uchiri kutsvaga basa kuMiddle East, pane zvinhu zvishoma zvaunofanira kudzivisa. Kunyanya kana isu tiri kutaura nezve kutsvaga basa muDubai uye Abu Dhabi.
Kukwanisa Kufunga Kunokunda kukwanisa kuona!
Yakawanda Inowanikwa Jojovo Tsvaga Zvikanganiso Zvokudzivisa
1. Ruzivo Rwakawanda Mukurarama Kwako
Zvakaitika zvebasa chokwadi hazvishande pane vita vitae kunze kwekunge wanyora chaicho chaicho chiitiko chekupa basa. Iyo yakanakisa ndiyo inoratidza izvo zvaunazvo kupe waanogona kushandira kuMiddle East.
CV yako inofanira kuva nezve chii unogona kupa unogamuchira kana HR maneja. Nekuti ichi ndicho chega chinhu chine basa kumushandi. Chinhu chakaipisisa nezve Cv yako ndeyekunyora zvaunoda mune basa rekupa. Ita shuwa yekungobatanidza chiitiko chakakosha chete. Semuenzaniso, iwe haufanire kusanganisira 34 makore enhoroondo yebasa kubva watanga kutengesa fodya yega yega yega $ 1 munharaunda yemunharaunda. Iko hakuna kudikanwa kuti ubatanidze yako yekusekondari chikoro zuva, kana izvo iwe like kuita muzuva rako rekubva.
Ndianiko mukuru wekukwikwidza kwako?
Zviuru zvevanhu zvinotumira yavo CV kuDubai. Saka, kazhinji kutaura, iwe unongove uine zvakapoteredzwa 3 masekondi ekuita fungidziro kune anotsvaga kana HR maneja. Saka ita shuwa kuti CV yako yakanaka usati watumira pamusoro kubazi reHR.
Vanhu vakuru ndivo vari kutsvaga mabasa mu Dubai maIndia, Pakistani uye Iranians. Iwe unogona kuva nechokwadi chokuti vazhinji vavo vanoshanda zvakaoma kuti vawane basa kuMiddle East. Vazhinji vevashandi vokune dzimwe nyika vari kutarisa Dubai blogs mazano pakutsvaga basa. Uye ivo vari kushandisa ruzivo rwekugamuchira basa rinokurumidza kukurumidza kupfuura iwe !.
2. Usambofa Wakawedzera Mashoko Akanyanya Kuwanda Muchivharorera Tsamba Yako
Dubai maneja ekubhadhara uye HR department vanoita haufanirwe kuverenga nezve chiitiko chako cheupenzi. Paunenge uchikundikana kana kugamuchira zvikoro zvepamusoro samambo wekuwana bar.
Iwe unofanirwa chete kuisa chikonzero nei iwe uchida ichi chekupa basa. Usambonyora chero chinhu pamusoro pekuti nei chichava chakanakira iwe. Nekuti uri mumamiriro ezvinhu akashata uye uri kutsvaga rubatsiro. Recruiters mu Dubai kungovenga izvo zvakanyanyisa.
Imwe pfungwa ndeye yako uye yemhuri mamiriro. Ivo, chokwadika, vanofanirwa kuramba vakavanzika chete kwauri. Sezvakaita yako zvakare, maneja maneja anoda kuziva zvaunogona kuitira ikambani.
Pane zvaunoda kutarisa?
Edza kugara uine tsamba yako yekuvhavha inonyanya kutarisisa nezvekupihwa kwebasa iri. Ita shuwa kuti iwe unoisa zvakakwana zvakakwana pamusoro nei iwe uri iye akakodzera mukuru yebasa uye rakakodzera kubvunzurudzwa. Kune rimwe divi, ita shuwa kuti vashandirwi vachakuwana iwe sewakakosha munhu anobva kunze kwenyika.
Nguva dzose tora nguva usati watumira mashoko ako. Ita chokwadi kuti unyore sei tsamba inotarisirwa kune wega mushandirwi. Ehe, tinoziva ibasa rakaoma. Asi ndiyo nzira chete yekuwana basa muDubai. Gara uchifananidza makoti ako nemawadhi emabasa. Saka anogamuchira anogona kuona kuti nei iwe uri mumiriri akanaka.
3. Dzidza neZvako Zvikwereti zveJobho
Ita shuwa iwe unoenderana ruzivo rwako nemabasa angangoita anopa. Basa rekutsvaga riri maitiro akareba muUAE. Saka, muchokwadi, ruzivo rwako rwunofananidzwa nemakarongwa mabasa epamhepo anoda kuve akakwana. Zvakanaka, kazhinji kutaura, ruzivo rwako runoda kuve pedyo nekuperera muDubai. Nekuti kune zviuru zvevanhu muMiddle East neAsia.
Uye mazuva ese vari kutumira yavo CV kune vanochera. Saka, edza kuva neruzivo padyo nepaunogona. Uye ita chokwadi chekuti chiitiko chako chakafanana pakati pebasa newe mumiriri.
Zvakakosha kutora nguva uye kushanda nesimba kunyanya munzvimbo yakabatikana yakaita seDubai. Uye nekutsvaga zvishoma nezvishoma mabasa anopa izvo zvinoenderana nemadhirezi ako kutsananguro yebasa.
Zviri kwauri kuti uratidze maneja weanoshanda sei wakanakira basa racho. Siya zvekufungidzira kunze kwe equation.
4. Kutarisa kugadzirira kutora basa kweminiti mushure memubvunzurudzo
Zvakanaka, imwe kukanganisa iyo iwe unogona kuita kungopfeka zvisina kukodzera kubvunzurudzwa yebasa muDubai. Nyika ino, zvirokwazvo, inyika yeMuslim, asi tsika dzebhizinesi dzinoshanda zvakanaka munyika ino.
Edza kusapedza simba pahurukuro yemubvunzurudzo. Nekuti izvo zvinogona kukuvadza iwe zvakatokura sekutaridzika sedhizi. Pamberi unowana kukokwa kumusangano kuyedza kuita zvishoma zvekutsvagurudza pamusoro pekambani uye nharaunda yebasa.
Iwe unogona here kukumbira vamwe kuti uve nemafungiro akatendeseka?
Unoziva chero munhu ari musangano iwe uchangobva kunyorera .. Kana zvisiri kushandisa Linkedin uye bvunza vanhu vari kushanda ipapo for code yekupfeka. Saka, kana iwe usina chokwadi nezve ruzivo Ita kuti vamwe vafunge kuti zviri nyore uye zvinobudirira. Bvunza vamwe pane zvavakapfeka zuva nezuva. Icho chichava chinhu chekutanga maneja weanoshandira anozoona muDubai.
5 Kutaura Chinhu Chakaipa Pabasa Rokukurukurirana
Nharo yechishanu ndeyekutaura zvinhu izvo panguva yakakodzera. Sezvawakangoshandisa zvinyorwa uye tsamba yekuvhara. Muchengeti anobva ku Dubai tichava neimwe pfungwa pamusoro uri ani uye zvaunoita zvekugara.
Kupfuura 60% yemhando yakashata yekutaura zvinhu. Hazvifanirwe kutaurwa, izvo zviri nani kuti iwe unofanirwa kusiiwa usina kunaka madhiri zvinyorwa panguva yekubvunzurudzwa kwebasa. Semuenzaniso, yako yega kana bhizinesi inokundikana panguva yekuvandudzwa kwebasa. Kana kune rimwe divi, sei wanga uine mwedzi mishoma gap mune yako ruzivo.
Pane zvaunoda kutsvaga ipapo?
Kubvunzurudza kunofanirwa kuve kwezve zvese zvaunogona kuitira kambani kana iwe wakapihwa basa. Goverana hunyanzvi uye hunhu zvinokuita iwe munhu akakodzera pachinzvimbo icho. Chii chaunofanirwa kunge uchiita muDubai ?.
Kuisa pfungwa pachako pakugadzira mechi pakati pako iwe nekupihwa basa. Kune rumwe rutivi, kutaura nenzira yakawandisa kunogona kukugogodza kunze kweanosarudza sarudzo yebasa.
6 Rega - Bvunzurudza Maitiro muUAE
United Arab Emirates ndizvo nenzira yakanaka kupfuura chero nyika. Uye zvirokwazvo muDubai, Abu Dhabi kana Sharjah iwe uchava nehurukuro iyo yakange isingashandisi.
Dzimwe nguva, izvo hazvina kungoitirwa kuve, uye ruzivo rwako ndiyo nzira chaiyo yekupa iyi basa. Kunyangwe iwe uchikwanisa kupfuudza bvunzurudzo uye wanga usati waridzira muUAE.
Nekudaro, pane kumwe kubvunzurudza uye zvakatarwa zvikanganiso izvo zviri nyore kudziviswa. Semuenzaniso, usanonoke, usambomirira kufona. Zviri nani nzira kufonera anogona kubiridzira uye unomuratidza kuti iwe unoda basa.
7 Ita Zvechokwadi Une Zvaunotaura kubva kuUAE
Imwe yeiyo zvakakosha kukosha kwekuwana basa muDubai. Ingori chete ine seti yezvirevo kubva kuDubai yakavakirwa sangano muCV yako. Uye gara uchigadzirira kupa ruzivo rwevanosangana paunoita basa rekutsvaga.
Vatungamiri veVashandi vevanhu vachatarisa mumwe nomumwe wavo.
Mhosva yakaipisisa iwe yausingade kuti zviitike ndeyekutora ma ex-mamaneja kokupedzisira maminetsi uye uchivaudza kuti iwe unofanirwa kupa munhu akavimbika kuti akanaka sei uye wakasimba sei iwe unogona kushanda.
Pakutanga, ipa runhare kune yako dhipatimendi reHR. Wobva wagadzira rondedzero yeanongedza akagadzirira kupa asi chete kubva kumakambani eUnited Arab Emirates. Chii chaunofanirwa kunge uchiita muDubai ?. Chengetedza yako yekusarudzika yakavhurwa uye usambopisa mabhiriji. Iwe haamboziva kana iwe uchivada.
8 Kukanganwa Kuitevera Pashure pokukurukurirana
Mumwe maitiro akaipa ndee kwete kutevera mushure mekubvunzurudzwa kwebasa. Mune zvimwe zviitiko kunogona kubatsira iwe kuwana basa. Semuenzaniso, inokupa imwe imwe mukana yekuyeuchidza nezvako uye kuita chimiro chakanaka.
Vagadziri muDubai saizvozvo kukoshesa nguva yavo uye kushanda kwavo. Saka, smartly yakaitwa yekutenda email kazhinji zuva rimwe mushure mekubvunzurudzwa. Zvinonzwisisika inzira yakanaka yekuratidza iwe tenda nguva nemukana waunofanirwa kushandisa.
Kutevera kumusoro zvakare kunokupa iwe mumwe mukana wekuwedzera zvakare mamwe e zvinhu zvakakosha iwe zvaunokanganwa. Semuenzaniso, chero chinhu chaunoshuvira dai wanga wataura panguva yekubvunzurudzwa. Sezvakaitika kwauri nekambani ye xyz. Kana chekuwedzera chitupa izvo zvinogona kuvabatsira kusarudza kutora iwe mubhodhi.
9 Kusiya Basa Rako Nezvakaipa Zvisingabatsiri
Mazhinji eexats muDubai. Ivo havafungi nenzira kwayo. Zvakanaka, Zvaunofanirwa kunge uchiita muDubai ?. Kwete kutaura chero chakaipa nezvekambani paunenge uchirarama.
Nekuti zvine basa zvaunotaura munzira yekubva kukambani. Uye zvechokwadi vatungamiri, vachiri kukuyeuka iwe. Saka, maonero nezve iwe zvine basa mukati menguva yakareba.
Semuenzaniso, vanozotarisira kunyorera vanowanzo tarisa mareferensi kubva pakupedzisira 3 kusvika kune 6 vashandirwi. Saka, kana wakasiya basa rako rekupedzisira pane noti yakashata. Uye mamaneja anobva ipapo anoti iwe waita hunyengeri zvinogona kudzoka kuzokutambudza. Nekudaro, edza kushandisa uropi hwako uye chengetedza kudzidza kwemanzwiro. Uyezve, usazombo taura yako yekambani yekambani icho chaive kukanganisa.
10 Chii chaunofanira kunge uchiita ku Dubai kuti urarame?
Nguva dzose edza kuchengetedza pfungwa dzako nenzira kwayo. Usambo edza kuita hunyengeri. Nzira yakanakisa ndeye, kuva akavimbika, uye kushanda nesimba kuti uwane chinangwa. Dubai inyika yakasimba kwazvo iyo isingatenderi chero chinhu chetsotsi. Zvakare, chero sarudzo yakaipa ichaisa iwe mumatambudziko uye iwe uchagara mu jeri remunharaunda kuDubai kana iwe uchaendeswa kune yako pachako nyika. Icho ichokwadi, uye icho chinoita kwauri.
Iko kugona kwekufunga pamberi pekukwanisa kuita ...
Smart inofamba ichaita ita kuti kurota kwako basa kuwanikwe!
Uchifunga izvozvo. MaIndia nePakistan vachiedza kuwana basa muUAE. Nekudaro, nemakwikwi ezuva nezuva akanyanya, mabasa aya anoita kunge asingagoneke. Asi nezvazviri, rinongova izwi.
Saka, zviwane iwe uye gadza mashoma emabasa kubvunzurudza panzvimbo ipapo. Iye zvino wave kuziva zvausingakwanise kuita muDubai. Ino ndiyo nguva yekuita rako rekuvhima basa muhurongwa hwekuita. CV uye tsamba yekuvhara inofanirwa kupurindwa uye kunyorwa zvakanaka.
Nzira yekumisa sei kubvunzurudza? Ingo zviita!
Zvisinei, vazhinji vezvidzidzo, kunyange vatariri vane ruzivo kubva kuSouth Africa uye Maphilippines. Dzimwe nguva vari kuwana zvakaoma kuwana bvunzurudzo yakanaka mune bhizinesi rekukura.
Unoda kudzivirira mamwe maitiro eDubai okukanganisa. Nekuti ivo vachadzikisa mikana yako yekunyatso kuwana sarudzo yekuchengetedza chinzvimbo chebasa. Uye for zvechokwadi dzikisa mukana wako wekukanganisa izvo kunyanya manejimendi basa rekupa.
Tiri kugara tichiedza kuvimbisa vanotsvaka basa kubva kune dzimwe nyika. Izvo mitemo imwechete inoshandiswa kuti ibudise zvese kuA Dubai. Uye kuMiddle East zvechokwadi inzvimbo yakanaka inomirira ramangwana rako.
Saka, kana iwe uchitevera Mitemo yakakodzera. Iwe unofanirwa kuwana basa kuDubai kana Abu Dhabi. Uye gara uchiedza kuita rako rekurota basa, chokwadi. Kunyangwe akaita seyakaipa sei. Edza kudzivirira potholes. Uye kurwira kune wekupedzisira kufema.
Ndeapi maitiro anoshandisa semudzidzi achangopedza kudzidza?
Munzvimbo yakaipisisa vachangobva kupedza kudzidza nevadzidzi vaMBA. Izvo hazvina musoro chero chikonzero nei vadzidzi vadiki vese vasina kuwana mukana we kuwana basa muDubai.
Ivo vechidiki vekutsvaga basa vanoedza kuita chikwereti ichi chikuru mushure mavo apedza kuyunivhesiti. Uye uchasiiwa uri woga. Saka, muchokwadi, vanofanirwa kuita mari zvakanyanya.
Semunhu mutsva mumusika webasa reDubai. Iwe unofanirwa kutanga waderera, kurega kufunga kuti uri munhu akadzidza. Iwe unofanirwa kutanga nekufamba zvishoma nezvishoma kumusoro munyika yemushandi. Kubva ipapo-hapana chakasiyana. Kune chero munhu zvisinei kuti ndeipi ndima yekudzidza ivo maneja kuita kuti uwane basa muDubai.
What tactics use as a Mutungamiri mu Dubai?
Vanoziva vanhu vane zvakawanda zvakawanda sarudzo. Asi muUnited Arab Emirates, kune nyika yemuromo nekubatana seyakaverengeka chinhu chinokubvumira kuwana basa padanho rekutungamira.
Iwe unogona kufunga kuti hazvina kururama iwe iwe se expat. Asi iwe ungada kupa shamwari yako kune munhu wausingazivi here? Saka, Dubai inzvimbo yemunzvimbo yakanaka asi pane mutemo waunofanira kutevera. Uye kana iwe ukakwereta munhu asina kururama uye iye akanganisa.
Nehurombo, imhosva inotsigira uye zviri pamutemo ndiye anoita kugadzirisa izvozvo. Uye mune dzakawanda nyaya dziri kutora kushushikana kwakawanda uye yakawanda mari uye yechokwadi mwedzi mishoma nguva.
Mutungamiri mu Dubai
mhedziso - Chii chaunofanira kunge uchiita ku Dubai?
Kutsvaga basa muDhaibha kunoda kusarudzwa uye kutsunga. Saka, kazhinji kutaura, havasi vose vanozokomborerwa nekuwana basa mu ngwara guta. Tariro iwe wagamuchira mashoma mashoma kubva kuDubai City Company. Uye iwe uchaashandisa kushandisa kwako kurota basa muDubai.
Gara uchivandudza yako Curriculum Vitae. Wadaro chengeta yako tsamba yekuvhaira yakanyatsogadzirirwa iyo yekupa basa. Tumira CV nguva nenguva uye tarisa ruzivo rwekushambadzira kwebasa usati watumira CV kune vangango shanda.
Ehe, vanhu vasati vatombogona kubiridzira muCV. Asi nguva idzo dzinosvika kumagumo. Ikozvino cheki yepashure cheki inoitwa nevatungamiriri vese. Saka, kana ivo vakatarisa kuti zvichaita zvakanyanya kukuvadza pane zvakanaka. Uye muDubai, pane tambo yakatetepa nokutendeka kwako.
Chii chaunofanira kuva uchiita Kuti uwane basa muUAE?
Izvo zvaunofanira kunge uchiita usati waenda !. Buruka pasi rondedzero yemikana mikana uye shandisa rimwe nerimwe. Pamabasa akanaka anopa unofanirwa kunge wakanyorera chete panzvimbo dzebasa rekumutemo.
Tarisa uwane chipangamazano uye uve neruzivo rwakakwana nezvekambani inotevera. Yakakosha nhare kana mareferenzi anotamba basa rakakosha mukuwana mabasa. Shamwaridzana pamhepo uye pamitambo yakatarwa mikana yakawanda yebasa.
Saka, enda pawebhusaiti uye wedzera iyo kero yewebhu. Iwe unowana aya makambani zvakaoma kutarisa online. Iwe haufanirwe kufunga nezve kubhadhara chero weavo anokunyorera. Vamwe vacho vanogona ikubatsire kuwana mabasa panzvimbo yako. Asi nerombo rakanaka, mazhinji acho angori makambani ekutyora.
Kufunga nezvezvose zvataurwa pamusoro apa!
Dubai uye kutsvaga kwebasa zviri pachena kunetsa kubata. Mazhinji chipingamupinyi uye zviuru, chokwadi, kuti uwane rako rekurota basa pamwe hazvina kukodzera kunyange pakupedzisira.
Iwe uchave uchiwana mabasa anopa nehumwe hunyanzvi hwekuita se vatengi basa komisheni base mikana. Nekudaro, kuwana chinzvimbo chemaroto ako kunogona kunge kusingaiti muDubai pakutanga. Saka, edza kuwana chero chinopihwa basa pakutanga uye zvishoma nezvishoma unokwira padanho rekambani. Saka, izvo zvaunofanira kunge uchiita muDubai? Zvirokwazvo ita kuti dhongi rako riende kuchikamu chinotevera. Kuomesa basa kutsvaga uye kuita tsika. Mira kurota nezve mabasa echiArabhu ekurota.
Dubai City Kambani ikozvino ichipa magwara akanaka eVashandi muDubai. Dare redu rakasarudza kuwedzera ruzivo rwemutauro mumwe nomumwe wedu Jobs in Dubai Guides. Saka, mune izvi mupfungwa, iwe zvino unogona kuwana mazano, mazano uye basa muUnited Emirates nemutauro wako.